Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar Tallo Ku Socota.
(Hadhwanaagnews) Thursday, December 06, 2018 12:27:37
barri hore ayqa ugu danbaysay meeshu ku dhashay, iyo guud ahaan pritish somaliland calanka u keentay koonfurta soomaaliya 60kii.
Waad taqaanaan Mr cabdi waa aqoonyahan ka mida aqoonyahanadda ugu waaweyn bulshada soomaalida xogaggaalna u ah oo waxbadan ka qora xaaladda aynu naalo iyo wadciga ay soomaaliya ku dhex jirto eegga .
Waxbadan wuxuu u doodaa wuxuu ugu yeedho midnimo soomaaliyeed I saga oo kasoo jeedda gobolka gebiiley iyo aaggaga galbeed ee soomaaliland.
In badan waxaan ka dhagaystaa doodo badan bbcda iyo voada Waxa haddaladiisa ka dhandhansadaa quus uuka taaganyahay dawladdaha Kala danbeeya ee soomaaliya, isagoona sheega in meesha ruwaayad lagu jilo ka
fog xaqiiqda iyo wadciga ka jira wanna runtii. Marka dhankaa laga eeggo
Haddaba waxaan kula talinlahaa inuuyimaado oo soo eeggo somaliland wuxuu indhihiisa ku arkilahaa inay aad uga duwantahay somaliland qaladaadbadan hajiraan Haddana inay waxbadan dhaanto soomaaliya balse caalamku Wali iska indho tirayo xaqiiqda ku gadaamin Somaliland
Qoraa Madaxbanaan Hamse Riiraash